AbakwaCoca-Cola bangenelela enkingeni yamanzi
IMEYA yeTheku, uMnuz Mxolisi Kaunda, ephuza amanzi adonswe ngaphansi komhlaba emcimbini wokwethulwa kohlelo, iCoke Ville, eKhusane, eMzinyathi Isithombe: SITHUNYELWE
INKAMPANI ekhiqiza iziphuzo ezihlohlozayo, iCoca-Cola Beverage South Africa (CCBSA), ihlela ukuguqula izimpilo zabantu ngohlelo lweprojekthi yamanzi adonswa ngaphansi komhlaba olwethulwe ngeledlule, eKhusane, eMzinyathi.
Lokhu kuvezwe nguMnuz Samkelo Nkosi obhekelela izinhlelo zokubuyisela emphakathini kule nkampani, othe inhloso yabo ngeCoke Ville, ababambisene kuyo noMasipala weTheku, wukuqeda izinkinga zemiphakathi eswela amanzi ezindaweni zasemakhaya.
“Ngale projekthi sikholwa wukuthi izinkinga zendlala yamanzi zizonqandeka. Lolu hlelo siqale ukulwethula eLimpopo, sadlulela e-Eastern Cape, njengoba siphinde salwethula eKhusane, eMzinyathi. Okwamanje sihlele ukuthi silandelele kulezi zindawo okwethulwe kuzo iprojekthi, ukuze sibone ukuthi ihamba ngendlela yini ngaphambi kokuthi siqhubeke nayo kwezinye izindawo,” kubeka uNkosi.
Eqhuba uthe njengoba inhlanzeko ibamba iqhaza elikhulu ekunqandeni iCovid-19, ukholwa wukuthi ukwethulwa kwalulo hlelo, kuzolekelela kakhulu esikoleni, iNew River Combined ehlomule ngamathangi amabili amanzi ahlinzekwe yile nkampani.
Induna yendawo, uMnuz Mndeni Nxumalo, ithe impilo ibinzima emphakathini waseKhuseni yabonga ukungenelela kwale nkampani nomkhandlu, athe ibakhiphe osizini obesekuphele iminyaka lubakhungethe.
“Umphakathi waseKhuseni ubuwathola ngoMsombuluko kuphela amanzi, bese ulinda isonto lonke ngaphambi kokuthi kubuye imoto yamanzi ngalolu suku. Kuhle kakhulu esenzelwe khona. Sesibheke usizo kunoma yimuphi usomabhizinisi ongaphonsa esivivaneni ukuze abafundi baseNew River Combined babe namathoyilethi ashaywayo,” kubeka induna.